PaveAI: Nisy nahita ihany ny valiny tao amin'ny Google Analytics! | Martech Zone
Alatsinainy 27 Febroary 2017 Alatsinainy 27 Febroary 2017 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro dia niady tamin'ny mpanjifa sy ny matihanina izahay tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ratsy Analytics. Misy lesoka maromaro, indrindra amin'ny Google Analytics, izay tsy fantatry ny olona matetika:
Fifamoivoizana sandoka - Analytics ny fifamoivoizana dia tsy misy fitsidihana ataon'ny bot. Ny olana dia misy bototra an-tapitrisany maro any izay manafina ny maha-izy azy ireo amin'ny maha bot azy. Mitsidika indray mandeha vetivety izy ireo, mampitombo ny tahan'ny fihenam-bidy ary mampihena ny fotoananao eo amin'ny tranonkala. Raha tsy manivana tsara azy io ianao dia mety handray fanapahan-kevitra ratsy.
Spam Traffic / Referral Ghost - misy adala any mandrobo ny anao Analytics pixel ary arosoy ny fivezivezenao mampiseho fa tranokala referral ho anao izy ireo. Tsy azonao sakanana akory izy ireo satria tsy mitsidika ny tranokalanao mihitsy izy ireo! Averina indray fa ny fanivanana ireo fitsidihana avy aminao ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitrao.
Fifamoivoizana tsy nahy - ahoana ny momba ireo mpitsidika tonga fanahy iniana tamina tranokalanao fa niala satria nitady zavatra hafa izy ireo? Nanana mpanjifa iray izahay izay nilahatra ambony tokoa ho an'ny kaody fiantsoana onjam-peo eo an-toerana. Isaky ny nisy fifaninanana tamin'ny radio dia nitombo ny fifamoivoizan'izy ireo. Nesorinay ilay pejy ary nangatahinay izy io mba hialana amin'ny motera fikarohana - fa tsy alohan'ny nahatongavan'izany tamin'ny ekipa mpivarotra izay tsy nahita.
Ka ahoana no fanivanana sy fizarazarana ny Analytics angon-drakitra mankany amin'ny sehatra azo ampiasaina sy manan-statistika ahafahanao mamakafaka tsara ny fihetsiky ny mpitsidika?
PaveAI: Fahitana Analytics mandeha ho azy
Tonga soa, PaveAI. PaveAI dia mamela anao hampiditra Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads (amin'ny alàlan'ny Facebook Business Manager) ary ny doka Twitter. Avy eo ny sehatr'izy ireo dia mampiasa algorithm AI sy sokajy statistika isan-karazany mifototra amin'ny angon-drakitrao fivarotana mba hamerenanao ny angon-drakitra rehetra ilainao handraisana fanapahan-kevitra hentitra. Ny tatitra aza dia manome ampahany sy ny fahafahany ho lasa mpitarika na mpamandrika.
Nanome santionana rafitra vitsivitsy izahay izay nanova ny Google Analytics ho lasa Anglisy maoderina ary naneho tatitra tsara dia tsara. Ary nanelingelina fitaovana an-taonina teo izahay… saingy tsy nisy na iray aza manome na ny mpanjifantsika ny topy ilain'izy ireo ary tsy manome anay ny fomba fijerinay ilaina hanaovana fanitsiana. PaveAI samy manao! Ny zava-misy fa izy ireo koa dia hanao tatitra momba ny anao Analytics tanjona sy faharetan'ny fotoan-dehibe koa dia sarobidy. Ity a santionany tatitra:
Tatitra santionany PaveAI - Taranaka mitarika
PaveAI efa manodina ny angon-drakitra mpitsidika 400 tapitrisa isam-bolana. Izy ireo dia manaisotra ny spam referrer ho azy ary mitondra ny angon-drakitra famandrihana newsletter anao koa.
PaveAI: tombontsoa sy fampiasa tranga
Ao amin'ny benchmarking, PaveAI dia nanampy ny mpanjifa hahatratra an fampitomboana 37% eo ho eo amin'ny fitarihan'ny firaka na fidiram-bola aorian'ny telo volana, ary salanisa Fihazonana 2x ho an'ireo masoivoho mihoatra ny iray taona. Tsy lazaina intsony ny fotoana anampian'izy ireo ny mpivarotra hamakafaka amin'ny famakafakana sy ny fanangonana tatitra avy amin'ireo rafitra tsy mitovy.
Misorata anarana amin'ny fitsapana maimaim-poana 14 andro PaveAI
Ny vidiny dia takatry ny saina noho ny sandan'ny data natolotra. PaveAI misy koa ny fahazoan-dàlana amin'ny orinasa, ny fahazoan-dàlana amin'ny maso ivoho ary ny fanoratana an-tsoratra.
Tags: aiAnalyticsfahaizana artifisialymailaka analyticsGoogle Analyticstaratrafmpaveaivinavinavinavina Analyticsmety